Gcina oku kuluncedo: Imithetho eli-10 eNtsha yoNxibelelwano lweNtlekele | Martech Zone
Iarhente yethu ibekwe eIndiana kwaye xa amagunya-abekho kurhulumente epasisa ingxelo yawo yoMthetho Wokubuyiselwa Kwenkululeko Yenkolo (i-RFRA), kwavela ingxaki. Yayingengombandela nje kaRhulumente. Kuba ichaphazele icandelo lezoshishino, iye yaba yingxaki kuthi sonke xa sisenza ushishino kurhulumente. Ngokukodwa xa ezinye iinkokheli zeshishini ngaphandle korhulumente ziqala ukuthetha kwaye zisoyikisa ngokuliqhankqalaza ilizwe (inika umdla ukuba ayikaze yenze isoyikiso kumazwe abathengisa kuwo asemthethweni alucalulayo kunye nokusilela kwenkululeko).
Abaqhagamshelwa bam kurhulumente bandixelela ukuba amandla-abo-bebexwayisiwe ngokuqinisekileyo ukuba babesiya kwisaqhwithi kwaye kwakungeyomfuneko kwaphela. Nokuba ungakowenu okanye uchasene nomthetho akunamsebenzi. Ingxaki ilandele- kwaye onke amashishini aqhankqalaza ukuzama ukufikelela ngaphezulu kwale meko. Kwakukho (kwaye kuyaqhubeka kunjalo), liphupha elibi kakhulu.
I-RFRA yayilinyathelo elihambisanayo sisininzi ngenxa yoko yasilela nakuphando kubaphulaphuli, kwaye ayikhange ixhumane namashishini okanye abathengi abenziweyo.
Uvukelo olulandelayo lwamashishini lwalungxolayo kodwa aluzange luthethe ngokuchanekileyo ukuba uninzi lwamashishini e-Hoosier, ayingobantu nje abambalwa abachaphazelekayo, abawalayo umthetho.
Isiphumo kukuba bobabini iqela elinoxanduva kunye nabachasi bobabini babenengxaki ezandleni zabo. Iqela elinoxanduva kuye kwafuneka libuyele umva kwangoko ngaphandle kokhetho okanye ukhetho. Inkcaso kwafuneka iququzelele kwaye izame ukwakha ilizwi elinye elichaza ukwala kwabo umthetho kumashishini angaphandle kukarhulumente.
Amajelo eendaba atsibela ithuba lokuphosa iinkuni emlilweni kwaye bafumana umlilo uvutha. Amashishini afana nathi ayanyanzelwa ukuba akhuphe ezethu iingxelo. (Khange sibuze okanye sixhase umthetho ngaphandle kwenkolo yam). Yayisisiqhwithi esigqibeleleyo.
Mhlawumbi eyona mpendulo ifanelekileyo yavela I-Ofisi ye-Indianapolis kaMeya, owathi-ngelixa elondolozayo-wathetha ngokuvakalayo ilizwi lamashishini kulo mmandla kwaye wazibeka ngokufanelekileyo kwisikhundla sobunkokeli ngaphezu kwerhuluneli. Yinto entle yokuhamba kwaye kubonakala ngathi iyazoyisa ezinye zeengxaki.
Isimanga sayo yonke le ngxaki, ngokoluvo lwam, kukuba yayizii-Hoosiers ngokwenene ezazivakalisa eyona ntshutshiso ingamandla… kwaye ke amashishini angaphandle kwale ndawo aqala ukuthetha ngokuduba i-Indiana… kunye nabakwaHoosiers abavakalisa inkcaso yabo. Ndidanile kumashishini angaphandle kweIndiana awayefuna ukwenzakalisa abo bathatha inyathelo kwaye bacinezela iinkokheli zethu zengingqi ukuba zenze utshintsho ngokukhawuleza.
Ndadliwanondlebe no URay Steele malunga nemeko yeWIBC:
Intlekele ngelishwa. Ithemba lam kukuba isifundo se-hubris esifundwe yiRhuluneli. Akuthandabuzeki ukuba uya kuphinda aphile, kwaye ngesizathu esihle.
The I-Agnes + Iqela lobukrelekrele boSuku Uyile i-infographic ebonisa imigaqo ebaluleke kakhulu ye-10 yonxibelelwano lweengxaki. Nceda uzive ukhululekile ukuyiprinta kwiqela lakho kwaye wabelane ngayo nenethiwekhi yakho.
Ukufunda imigaqo nganye engezantsi, ungabona ngokuqinisekileyo ukuba izinto zonakala phi e-Indiana.
tags: usuku lwe-agnesapilebenioffngxakiunxibelelwano lobunzimalawulo lweengxakingqoIgreg ballardindianamike penceprEyobudlelwane boluntui-ray steelenfraukuthengisawibc
Ezimbini iiMetriki ze-Ecommerce eziNtsha kufanele ukuba uzilandele